In android, Sqlite LIKE statement does not use index - MYSTERY ZILLION
In android, Sqlite LIKE statement does not use index
အန်းဒရိုက်အတွက် ပါဠိအဘိဓာန်ရေးကြည့်တာ sqlite query မှာ ပြဿနာနည်းနည်းတက်နေလို့ပါ။
table က အောက်ကအတိုင်းပါ။
CREATE TABLE define (_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT NOT NULL, word TEXT collate nocase,  definition TEXT)
ပြီးတော့ word column ကို index ဆောက်လုပ်ပြီး
CREATE INDEX `define_index` ON `define` (`word` ASC)
SELECT _id, word FROM define WHERE word LIKE 'က%'
Query က index ကို မသုံးဘူး ဖြစ်နေတယ်။
PC, Sqlite Browser မှာ စမ်းကြည့်တော့ ရတယ်။ index ကို သုံးတယ်။
query index မသုံးဘူးဆိုတာ ဘယ်လို သိသလဲခင်ဗျာ ?
EXPLAIN QUERY PLAN SELECT _id, word FROM define WHERE word LIKE 'က%';
ဆိုရင် ဘယ်လို ထွက်လာလဲဆိုတာ စမ်းကြည့်ပါလား ?
Explain query plan နဲ့ log ထဲ စစ်ပြီးပြီ ခင်ဗျ။
= တို့ > တို့ ဆိုရင်တော့ index ကို သုံးတယ်။
like မှာဘဲ မရဖြစ်နေတယ်
Equal တို့ Range တို့နဲ့ Index က Cover ဖြစ်တယ် Like မှာပဲ မဖြစ်တာဆိုရင်တော့ ဖြစ်နိုင်တာ စဉ်းစားကြည့်ပေးရရင် အရင်ဆုံးအနေနဲ့ သုံးတဲ့ Android မှာ SQLite Version နဲ့ Computer ပေါ်က SQLite ရဲ့ Version ကို ယှဉ်ကြည့်ပါဦး။ Like ရဲ့ ပြဿနာက B-Tree မှာ Case Sensitive က Default ဖြစ်လိမ့်မယ် အဲဒါဆိုရင် Index က Like အတွက် Cover မဖြစ်ဘူး COLLATE NOCASE ပေးထားပေမယ့် ကိုယ်သုံးနေတဲ့ Android မှာပါတဲ့ SQLite Version မှာ Support မလုပ်တာဖြစ်နိုင်တယ်။
Emulater api level is 25. sqlite version is 3.9.2 2015-11-02 18:31:45 bda77dda9697c463c3d0704014d51627fceee328.
window 10, db browser ကတော့ SQLCipher Version 3.11.0။
ဂဃဏန သိရအောင် sdk\_platform-tools ထဲမှာ ပါတဲ့ sqlite3.exe နဲ့ ထပ်စမ်းတယ်။
သူလည်း emulator နဲ့ version တူတယ်။
version အတူတူကို emulator ထဲမှာ index မသုံး။ PC ထဲမှာကျတော့ သုံးတယ်။
အောက်မှာပြထားတဲ့ Statement ၁ ကြောင်းကို Android ပေါ်နဲ့ PC ပေါ်မှာ Run ကြည့် ဘာ Result ထွက်လဲပြောပေး
ပြီးပြီဆိုရင် အောက်မှပြထားထဲ့ Statement ၂ ကြောင်းကို ထပ်ပြီးတော့ Android နဲ့ PC ပေါ်မှာ စမ်းကြည့် ဘာ Result ထွက်လဲ
ရသွားပြီခင်ဗျ။ ဘယ်လိုလုပ်ပြီးရသွားလဲတော့ သေချာမသိဘူး။
third party SQLcipher စမ်းကြည့်မယ်ဆိုပြီး sync လုပ်ပြီး code လေးငါးကြောင်းလောက်ပြင်ပြီးခာမှ ပြင်ရမှာတွေများလို့ ပြန်ဖြုတ်ပြီး နဂိုအတိုင်း ပြန်စမ်းတာ ရသွားတယ်။ Android Studio ဘဲ ကြောင်နေလို့လား မပြောတတ်ဘူး။
္ကကတော့ မစမ်းဖြစ်ဘူး။ word column က မြန်မာစာတွေမို့လို။
အင်း.. ရသွားရင်လည်းပြီးတာပဲ ကြောင်နေတယ်တော့မရှိပါဘူး ပြဿနာက တနေနေရာမှာရှိလို့ပါ။ ဖြစ်နေတုံးက Run ခိုင်းတဲ့ အဖြေတွေသိလိုက်ရင် ဘာဖြစ်နေတယ် အကြံပေးလို့ရလောက်တယ် အခုကတော့ ဘာလို့မှန်းမသိဘူး မှန်နေတယ်ဆိုတော့ Run လည်း အဖြေက အတူတူဖြစ်တော့မှာ ဆက်ပြောလို့မရတော့ဘူး။